Miyuu Jose Mourinho Oo Haddaba Si CAD Ugu Dhawaaqay In Uu Cristiano Ronaldo Ka dalbaday In Uu Shaqada Tababaranimo Ee Juventus Ka Badalo Maxi Allegri Badali Doono? - Gool24.Net
Jose Mourinho ayaa haddaba u muuqday in uu shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu ugu baaqay in uu xagaagan kula soo biiro kooxda Juventus si uu badal ugu noqdo Massimiliano Allegri.
Waxaa hore u soo baxay warar sheegayay in Cristiano Ronaldo uu dalbaday in kooxda Juventus aan la keein Antonio Conte basle Jose Mourinho ama Carlo Ancelotti midkood uu badalo Massimiliano Allegri.
Laakiin Jose Mourinho oo la hadlayay BeIN Sports oo uu hadda falanqeeye kubbada cagta ah ka yahay ayaa shaaciyay in mid ka mid ah ciyaartoydiisii hore ee uu xidhiidhka fiican la leeyahay uu isaga ka dalbaday in uu xagaagan kula soo biiro kooxda uu ka tirsan yahay.
Iyada oo aan la ogayn ciyaartoy kale oo uu Jose Mourinho soo maamulay oo ka tirsan koox tababare waqti xaadirkan u baahan oo aan Juventus ka ahayn, ayuu hadalka Mourinho si buuxda u cadeeyay in warkii dalabka Ronaldo ee Mourinho uu dhab ahaa.
Jose Mourinho oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Mid ka mid ah ciyaartoyda aan xidhiidhka fiican la leeyahay, koox ayuu u ciyaaraa wuxuuna aniga iga dalbaday : ‘Waxaa waajib kugu ah in aad halkan timaado’ aniguna waxaan u sheegay: ‘ Iyagu ima jecla aniga’ “.
Mourinho oo wali sii wada sheekadii ciyaaroygan dhex martay ayaa yidhi: “Waxa uu aniga ii sheegay: ‘Saddex kulan ayaad guulaysanaysaa waxayna iyagu bilaabayaan in ay ku jeclaadaaan addiga”.
Jose Mourinho oo u muuqda in si cad ugu muuqday in ciyaartoyga ka hadlayaa uu Cristiano Ronaldo yahay ayaa xusay in ay ixtiraam xirfadlenimo isku hayaan xataa markii uu xidhiidhkoodu xumaa.
Jose Mourinho ayaa yidhi: “Waxaanu nahay xirfadleyaal, midkaayaba kan kale ayuu ixtiraam u hayaa, xataa markii aanu garoonka dhexdiisa iyo war war saxaafadeedka xidhiidhka xun ku lahayn , ciyaartoygu mid kale ayuu ku cadhoon karaa”.
Jose Mourinho ayaa isku dayay in aanu wax magac ah sheegin laakiin qaabka uu uga hadlay arintan iyo warkii ka horeeyay ee sheegay in Ronaldo uu si toos ah Mourinho dalab ugu diray ayaa ah kuwo si buuxda isku fasiraya.
Cristiano Ronaldo ayaa door ku yeelan kara in Jose Mourinho iyo Juventus uu isku soo jiido wuxuuna hadda Mourinho ka mid yahay tababarayaasha ugu cad cad ee badali kara Maxi Allegri.